Imizekelo yeelogo zesikolo | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | 06/05/2022 19:00 | Ezahlukeneyo
Ukuyila ilogo yesikolo akuyona inkqubo elula okanye ekhawulezayo njengayo yonke into enento yokwenza noyilo. Kuthatha ixesha kunye nomsebenzi oqhubekayo wokudalwa kwayo. Kubalulekile ukwenza uphando lokuqala ukwazi imbali yaso kunye nokuphanda ezinye iilogo zesikolo ukukhangela iireferensi.
Inkqubo yokudala isazisi senkampani kuthetha umsebenzi onzima kunye nokuzinikela kwicala leqela loyilo. Kufuneka ube ziingcali ukuze ufumane iziphumo ezizezona zilungileyo kuphuhliso lwelogo yeziko lemfundo.
Inkalo yemfundo ithathwa njengenye yezona zinto zibekekileyo kunye nezobuchwephesha ezikhoyo, ke ngoko kufuneka ufune kwaye ukwazi ukwenza isazisi ngokwefilosofi yakho kunye nendlela yokusebenza. Kufuneka zibe ziilogo ezicocekileyo, ezinokugqiba okuhle kunye nobuntu.
1 Kufuneka ibe yintoni ilogo yeziko lemfundo?
2 Iilogo zesikolo ziyakukhuthaza
2.1 eBoston College
2.2 Isikolo saseMaria Nebrera
2.3 Isikolo sooTata bePiarist eCalasanz
2.4 Isikolo saseJuan Rulfo
Kufuneka ibe yintoni ilogo yeziko lemfundo?
Ilogo yi indlela isikolo esiphuma ngayo kwabanye kwaye ubonisa uluntu ukuba lunjani na njengeziko lemfundo.
Xa sinikwa ithuba lokuyila isazisi sesikolo, into yokuqala ekufuneka sicinge ngayo, emva kwenkqubo yophando kunye neereferensi, yintoni na. Ingaba iziko lifuna ukuhambisa ntoni?. Isikolo esiqhelekileyo asiyi kuhambisa ngokufanayo nenye yemfundo yezenkolo.
Ukudala kuhamba indlela ende, kwaye kufuneka gxila ekuqokeleleni ulwazi oluninzi lwabathengi kangangoko kunokwenzeka, kungekuphela nje oko inkqubo yabo yemfundo isekelwe kuko, kodwa koko bakufunayo, ziyintoni na iinjongo zabo, indlela abafuna ukubonwa ngayo, njl.
Iqela loyilo kufuneka lifake yonke le ngcaciso kwaye lisebenze kunye nelo fomu eyenziwe kuphando ukuze lifumane iingcamango eziphambili zeziko oza kusebenza kulo. Ulwazi oluninzi olufunyenweyo, inkqubo yoyilo iya kuba lula.
Njengezinye iinkampani, amaziko emfundo "akhuphisana" phakathi kwawo ukuze akhethwe njengendlela yokufundisa abantwana bethu. Bathengisa ulwazi kwaye hayi ngenxa yoko, abadingi isazisi esisebenzayo esihambelana noko bakunikezayo. Ilogo esebenzayo, eyomeleleyo, ekhuselekileyo yinto enokukunceda ugqame kwabo bakhuphisana nabo., ngaphandle kwesibonelelo semfundo, amaziko, iingcali, njl.
Ilogo esebenzayo, bubuso besikolo, ayithethi nje kuphela ngembono yezemfundo yeziko, kodwa ikwaqaqambisa iinkalo abaziingcali kuzo. Kuya kufuneka wazise uhlobo lwakho lwemfundo njengoko besichazile ngaphambili, kodwa kwangaxeshanye kufuneka kube lula ukuyikhumbula.
Iilogo zesikolo ziyakukhuthaza
Kweli candelo, siya ukuqokelela iilogo ezahlukeneyo zamaziko emfundo kunye nezikolo. Siza kuthetha ngenkqubo yoyilo kunye nezinto eziqulunqayo.
Siza kubonisa ukusuka kwizazisi zezona yunivesithi zidumileyo ukuya kwezona zikolo ziqhelekileyo. Uya kufumana uluhlu olunezinye iilogo ezisebenza ngcono ukuza kuthi ga ngoku.
Iziko lemfundo ephakamileyo lamaJesuit. I logo yi eyakhelwe kwisiseko sesetyhula esineziko elitsolileyo kunye nezangqa ezigxininisiweyo. Embindini wesazisi kukho ikhaka, elahlulwe libe ngamacandelo amabini.
Kwindawo ephezulu yekhaka elikhankanyiweyo sinokubona uxande olumnyama apho kukho uphawu lwelanga kunye nombhalo othi IHS, kunye nomnqamlezo kunye nezithsaba ezimbini. Emazantsi ebomvu, siyabona iintaba ezintathu kwaye kuzo incwadi evulekileyo enemotto yeziko.
Ukwamkela ikhaka elisezantsi liribhoni enebinzana elithi, Religioni et Bonis Artibus. Ekugqibeleni, ukujikeleza yonke le nto, isangqa sibekwe kunye ne igama leziko ngesiLatini kunye nonyaka wesiseko.
Isikolo saseMaria Nebrera
Ilogo yesi sikolo ngu yakhiwe ngohlobo lwekhaka okanye umfuziselo. Ngaphakathi kwayo, kukho igama leziko lemfundo, kunye neempawu ezahlukeneyo ezimele isixeko esikuso iSikolo iMaría Nebrera.
Los ii-icon ezintathu ezibekwe ngaphakathi kwilogo zinomsebenzi owahlukileyo, kwaye kukutyumba udidi lweziko. Kwinxalenye ephezulu ekhohlo kukho umfanekiso omncinci weSierra Nevada, ohambelana nommandla wabantwana. Ecaleni kwayo kukho i-icon yeAlhambra, eyenzelwe indawo ephambili. Kwaye, ekugqibeleni, into ehambelana neendawo eziqhelekileyo, iGranada.
Isikolo sooTata bePiarist eCalasanz
Kule meko ilogo yesi sikolo yahlulwe yangamacandelo aqondwa ngokugqibeleleyo anjengesimboli kunye nelogo. Isimboli siyilwe ngokusekelwe kumfanekiso wejometri njengesangqa apho i-icon yommeli weli ziko ifunyenwe. Kwelinye icala, kwilogo asiboni kuphela igama lesikolo kodwa nendawo.
umyili, uphawu imibala emibini yequmrhu, omnye ophambili ngulo siwubona kwi-brand kunye nenye yesibini, eya kusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo ezenziwe njengombala wenkxaso okanye kwiimeko apho uphawu kufuneka lubekwe phezu komfanekiso.
Isikolo saseJuan Rulfo
Sikwidolophu yaseUsme eColombia, esi sikolo ibonisa uyilo olusekwe kubuhle bekhaka. Le elementi yakhiwe kwimilo yedayimane abafuna ngayo ukuthumela umyalezo wenguqu, oko kukuthi, abafundi babo baphuculwe bade bakhanye xa bephuma besiya kwihlabathi lokwenyani.
Kulo umzantsi wekhaka siyakwazi ukubona ibhendi eyamkela le milo kwaye unokufunda kuyo Isilogeni sedolophu, "Impumelelo ndim". Isazisi esipheleleyo sophawu lwakhiwe kwimigca enyukayo efuna ukuvakalisa ukukhangela ukukhula.
Kule meko, le logo njengakwingaphambili inalo iindlela ezimbini zokusebenzisa. Kwesinye sinokusebenzisa isazisi ngokupheleleyo, kodwa kwizicelo ezahlukeneyo kuya kufuneka kuphela ukusebenzisa i-acronym CJR.
Ngale mizekelo unokufumana umbono wazo zombini uphando kunye nomsebenzi woyilo obandakanyekayo kwilogo yesikolo. Kufuneka nje ugxininise kwiimfuno zeziko lezemfundo kwaye uzame ukuthabatha iindawo okanye iimpawu ezibonakalisa kwelinye inqanaba.
Sinethemba lokukunceda ngale mizekelo yahlukeneyo ukuze xa unikwa uyilo lweziko lemfundo, wazi ukuba ungasijonga njani na isifundo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Imizekelo yeelogo zesikolo